Iza moa izahay? - Dextube
Stainless miray volo Straight Tubing
Stainless BA miray volo fantsona
Pneumatic Varingarin'i Tubing
High Pressure fantsona
Stainless miray volo mihorongorona Tubing
Vita tubing faritra
azo ampiharina Standard
Dextube dia matihanina avo lenta mpanamboatra ny fametrahana mazava tsara Stainless vy miray volo fantsona ao Shina.
Ny vokatra lehibe hifantoka amin'ny fametrahana mazava Stainless miray volo Tube, indrindra tahaka ny fantsom BA, UHP tahaka ny fantsom, hydraulic tahaka ny fantsom, Instrumentation tahaka ny fantsom, Capillary tahaka ny fantsom, ary koa ny mihorongorona tubing.
Tsy mikendry ny hanome ny olona arovany amin'ny avo-mahafeno fepetra, sy ny vidim-mahomby entana araka ny fenitra iraisam-pirenena na fepetra namboarina. Amin'ny fanompoana hevitry ny hoe 'ny fahadiovam-po, sy ny fahombiazan'ny asa', isika sy ny an-trano hanome oversea mpanjifa amin'ny vidiny tonga lafatra-nanampy fanompoana.
Amin'ny azo antoka taorian'ny asa fanompoana varotra, ny vokatra no naondrana tany Alemaina, Frantsa, Kanada, Etazonia, Brezila, Malezia sy Singapore sns amin'ny tambajotra midadasika ny mpanjifa. Ny vokatra efa nahazo laza eo ambony ny mpanjifa.
Dextube, Ny Mendri-pitokisana tamin'ny fametrahana mazava Partner Stainless Steel miray volo Vahaolana ny fantsom.
Adiresy: 16 / F, Taihushijia Building, No.1198, Defu Road, Shanghai, 201821, Sina
Masìna ianao, avelao ny mailaka ho antsika Izy ary ho mifandray ao anatin'ny 24 ora.